phone bill မကုန်အောင် အင်တာနက် free သုံးမယ် | ကိုနန္ဒ
အထွေထွေ သုတ ရသ နှင့် ကဗျာများ
Home » Andriod Software , Andriod နည်းပညာ , Andriod ဆော့ဝဲလ်နှင့် နည်းပညာ » phone bill မကုန်အောင် အင်တာနက် free သုံးမယ်
phone bill မကုန်အောင် အင်တာနက် free သုံးမယ်
Posted by nan da Posted on 16:51 with No comments
ဒီနည်းလေးးကတော့ ဆိုက်တဆိုက်ကနေတွေ့လို့ ကျနော်ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ...။အသုံးဝင်မယ်လို့ လည်း ထင်ပါတယ်..။ကျနော်ကိုယ်တိုင်က အင်တာနက်ကို free သုံးနေတာဆိုတော့ သူငယ်ချင်းများ ကိုလည်း ရစေချင်ပါတယ်.....။ဒီနည်းလေးကိုရေးသားတဲ့ ကိုနေလင်းဖြိုး ကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်ဗျာ...။ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာ ကို ချိတ်ပြီးသုံးတဲ့ သူတွေ အတွက် တကယ်ကောင်းတဲ့ နည်းလေးပဲဗျာ..။
ကဲ အားလုံးပဲ ဒီတစ်ခါတော့ Facebook ထဲကကျွန်တော်ဘော်ဒါတစ်ယောက်ဆီကနေ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ အင်တာနက်ဖုန်းသုံးနည်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သိထားရမှာက နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေရတာဟာ အိပ်ရေးပျက်ခံ၊ အပင်ပန်းခံပြီးရှာရတာမို့ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် အပြစ်မဆိုကြဖို့ ကြိုတင်ပြီး သတိပေးချင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ မူရင်းပို့စ်ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ဖော်ပြထားတဲ့နည်း၊ သူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Device တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ။ အခြား Device တွေကိုလည်း ကျွန်တော်အနေနဲ့ မစမ်းသပ်နိုင်လို့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ အောက်ကပို့စ်တွေဟာ မူရင်းပို့စ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ စာသားအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတွေကို ပြင်ဆင်ပေးတာက လွဲလို့ပေါ့။ :D
1. 3G အင်တာနက်ဖွင့်ထားသော Sim Card (မှတ်ချက်...GSM လဲရပါတယ်)
2. ကိုယ်ရဲ့ဖုန်းလုံခြုံးရေအတွက် စိုးရိမ်တယ်ဆိုရင် IMEI ကို Fake လုပ်ထားရပါမယ်
(ဒါကတော့ လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်ကတော့ မလုပ်ဘူးအေးရော India ကဆိုရင်တော့လိုမယ်)
3. လုပ်နည်းကတော့ APN setting ချိန်းတာပါ အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
(မှတ်ချက် ကျွန်တော်ကတော့ Samsung Galaxy Ace (GT-S5830i) andriod version 2.3.6 Root လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ Device စမ်းသပ်ထားတာဖြစ်လို့
Galaxy APN ချိန်းနည်းအတိုင်းတင်ပြပါမယ်) Kali Linux-Gnome (32bit) ပါ ဖုန်းကနေ USB Tethering လုပ်လိုက်တာနဲ့ auto ချိတ်ပါတယ်။ ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူး တကယ်လို အဲလိုမရဘူးဆိုရင် Backtrack Myanmar Group ကိုသွားပြီးမေးကြည့်ပါ။
Setting >>>Wireless and networks>>>Mobile networks>>>Acess Point Names
ကိုအဆင့်ဆင့်သွားပါ ပြီးရင် Menu key ကိုနှိပ်ပြီး New APN ကိုရွေးပါ ပြီးရင်
---Name နေရာမှာ 3G free (any) Type 1 WAP လို့ဖြည့်လိုက်ပါ
---APN နေရာမှာ wapwest.cellone.in လို့ရေးပေးပါ
---Proxy နေရာမှာ 110.100.3.2 လို့ရေးပါ
---Port နေရာမှာ 9209 လို့ရးပါ
---User name နေရာမှာ ppp လို့ထည့်ပါ
---Password နေရာမှာ ppp123 လို့ရေးပါ
---Server နေရာမှာ 110.100.3.2:9209 လို့ထည့်ပါ
---MCC တော့ 414 ပါပဲ
---MNC တော့ 01 ပါ
---Authentication type မှာ CHAP ကိုရွေးပါ
---APN type မှာ Internet ကိုရွေးပါ
ပြီးရင် Save လုပ်ပြီး ခုလုပ်ထားတဲ့ APN ကို ON ခဲ့ပါ။
ပြီးရင် အင်တာနက်ကို On လိုက်ပါ သိုမဟုတ် Use packet data ကို အမှန်ခြစ်လိုက်ပါ
ဟုတ်ကဲ့ အင်တာနက် မရသေးပါဘူး ရအောင်လုပ်ရပါအုံးမယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Kali Linux OS တင်ထားတဲ့ computer မှာ usb tethering ကို on လိုက်ရပါမယ်။ အင်တာနက်တက်ပြီးဆိုတာနဲ့ *124# ကို ဖုန်းက Check လုပ်လိုက်ပါ။
တတ်နိုင်ရင် ဖုန်းထဲက background data တို့ sync တို့ကို ပိတ်ထားလိုက်ပါ ပြီးရင်သုံးလို့ ရပါပြီ။
*_အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုက ကွန်ပျုတာမပိတ်မှီ သို့မဟုတ် tethering ကိုမဖြုတ်မှီ ဖုန်းကအင်တာနက်ကို အရင် ပိတ်ရပါမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ပိုက်ပိုက်ဖြတ်ပါတယ်_*
MPT က မပိတ်သရွေ့တော့ရနေပါလိမ့်မယ်။ ပိတ်သွားရင် တားတားလဲမတတ်နိုင်ပု ဟိဟိ။
ဖြည့်စွက်ချက် ။ လိုအပ်ချက် တစ်ခုရှိသွားတယ်ဗျ kali မှာသုံးမှ မဖြတ်တာ ကျန်တာတွေမှာဖြတ်တယ်နော် ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာမပိတ်ခင် အင်တာနက်အရင်ပိတ်ရတယ်။ မနေ့က kali OS (Gnome) နဲ့ သုံးတာ မဖြတ်လို့ ဒီနေ့ backtrakနဲ့သုံးတော့ ဖြတ်သွားတယ် မကျေနပ်လို့ kali နဲ့ ပြန်သုံးတာ မဖြတ်ဘူး kali ကိုနဲ့အဆက်သွယ်မဖြတ်ခင် အင်တာနက်ကိုအရင်ပိတ်ဖို့မမေ့နဲ့အုံးဗျ။
Kali Linux ကို ဒေါင်းချင်ရင် ဒီ ကိုသွားပါ။
Kali OS, BT တွေအကြောင်းအသေးစိတ်သိချင် ဒီ ဂရုကိုသွားပါ။
ref : http://coffeecrazylay.blogspot.com
Facebook Like ခြင်းဖြင့်ပို့ စ်အသစ်များအလွယ်တကူဖတ်နိုင်ပါပီ
ပီမိုးနင်း - မိန်းမစိတ်ကျမ်း စာအုပ်လေးပါ။ ဖတ်ချင် ၊ လေ့လာချင် ၊ စူးစမ်းချင်တဲ့ သယ်ရင်းတွေ စိတ်ကြိုက် သာ ဒေါင်းပြီး ဖတ်နိုင် လေ့လာနို...
Viber For PC (ကွန်ပျူတာမှ Viber ကို မြန်မာလို ကောင်းစွာ မြင်နိုင်ပါပြီ)
သူငယ်ချင်းတယောက် Cbox မှာ မေးလာလို့ ဒီနည်းလေး ရေးတင်လိုက်ပါတယ်။ အရင်က လည်း ၀က်ဆိုဒ်တွေ မှာ လည်း ဒီနည်း ကို ရေးင်္ပြီးသားပါ။ မသိသေးတဲ့ သူ...
ပီမိုးနင်း - ကာမသိဒ္ဓိကျမ်း စာအုပ်လေးပါ။။ မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်မျှဝေလိုက်တာပါ။။ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ခင်းတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ...
ရွှေရိုး Dictionary (မြန်မာ အင်္ဂလိပ် ၊ ထိုင်း ၊ ဂျပန် ၊ ကိုးရီးယား ၊ ရုရှား)5ဘာသာ အဘိဓါန် ဆောဝဲ
ရွှေရိုး Dictionary လေးကတော့ ဘာသာ ၅ ဘာသာ အဘိဓါန် ဆောဝဲလေးပါ။ ကွန်ပြူတာထဲမှာ Install ထားရုံ လေးနဲ့ Offline အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ကွန်ပြူ...
ပီမိုးနင်း - အပျိုလမ်းညွှန် စာအုပ်လေးပါ။။ မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်မျှဝေလိုက်တာပါ။။ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ခင်းတွေ အောက်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ...
Fake Serial လုံးဝ မဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Internet Download Manager V 6.18 Build9Final Full
အခု ဒီလမှ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Internet Download Manager V 6.18 Build9Final ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ 6.18 Build9Version က Fake S...
Computer မပါပဲ ဖုန်းဖြင့် Root လုပ်နည်း
ဗားရှင်း 4.0.4 နှင့် အထက် ဖုန်းများ(မည်သည့်ဖုန်းမဆို) ကို မိမိ ဖုန်းဖြင့်လွယ်ကူစွာRoot ပြုလုပ်နိုင်ရန် https://waimin.googlecode.com/files...
Photo Collage Max Pro 2.2.5.2 (မွေးနေ့ကဒ်, ဖိတ်စာ လိပ်စာ, ပိုစ်ကတ် နဲ့ ပြက္ခဒိန် ဒီဇိုင်းကဒ် လှလှလေးတွေ ဖန်တီးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်)
ဒီနေ့တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေး ကတော့ မွေးနေ့ကဒ်, ဖိတ်စာ လိပ်စာ, ပိုစ်ကတ် နဲ့ ပြက္ခဒိန် ဒီဇိုင်းကဒ် လှလှလေးတွေ ဖန်တီး လို့ရတဲ့ ဆော့...
Nokia Lumina (Windows Phone) မှာ မြန်မာဖောင့် ထည့်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ဒီနည်းကို စမ်းကြည့်ပါ။
အွန်လိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းတော်တော်များက Nokia Lumina (Windows Phone) တွေ မြန်မာဖောင့် ထည့်ချင်တယ်။ ထည့်နည်းတွေ မေးနေကြတာ များလို့ ဆိုဒ်ေ...
Android ဖုန်းထဲမှာ ဓါတ်ပုံတွေ ကို Slide Show လုပ်မယ်
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Android ဖုန်းမှာ မိမိစိတ်ကြိုက် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို နောက်ခံ သီချင်းလေးနဲ့ မလုပ်ချင်ကြဘူးလား။မလုပ်တက်ဘူး...
Copyright © 2013. ကိုနန္ဒ - All Rights Reserved